राजा’लाइ जति, देशको,माया नेतालाई हुदैन रहेछ: मनिषा कोईराला:: Mero Desh
राजा’लाइ जति, देशको,माया नेतालाई हुदैन रहेछ: मनिषा कोईराला
Published on: १८ श्रावण २०७८, सोमबार ०८:१५
काठमाण्डौं।यो सत्य होकि, जस्तो नागरिकका रुप हुन्छन्, देशले त्यस्तै अनुहारका नेता पाउने हो । हामी जस्तो छौं, नेताहरु पनि त्यस्तै जन्मिने कुरामा कुनै दुईमत नहोला ।” नागरिकका केहि क’र्तब्य छन्, जस्ले देशका आधा समस्या हल गर्छ । राजनीति दल, नेतालाई आ’लोचना गर्ने अधि कार त्यो ब्यक्तिले मात्र, राख्छ, जस्ले कुनै न कुनै’कर्तब्य देशप्रति नि’र्वाह गरेको हुन्छ ।
उदाहरणका लागि, हामी एकछिन सडक,वजार, अस्प ताल, स्कुल, कलेज, कार्यालय वा जहिंतहिं हेर्यौं भने हामी सारा नेपाली आफ्नो क’र्तब्यवाट च्यु’त भइरहेका छौं।जबसम्म नागरिकले आफ्नो तर्फवाट उच्च सभ्यता सिक्दैनौं,तबसम्म ठुला ठुला विकास भएरपनि हाम्रोसमाज माथि उठ्न सक्दैन ।
त्यसैले, ठुलो कुरा हाम्रो कर्तब्य महत्वपुर्ण हो । के भार तको विहारमा, कलक’त्तामा, उत्तरप्रदेश मा हाम्रो भन्दा धेरै विकास भएको छैन र ? तर, के त्यहाँ ‘नागरिक सुखी, खुशी र स्वतन्त्र छन् ? पक्कै छैनन् ।जहाँ दैनिक हजारौं महिला हिं’सा, कु’रीति, अ’न्धविश्वास, ज’डता, हुकु’मी
शासन, असभ्य ता लगायत कु’संस्का’र वाट समाज नार कीय खाल्डोमा जकडिएको छ । विश्वमा यस्ता केहि देश का स्थान छन्, जहाँ रेल कु’द्छन्, तर त्यहि रेल मुनि दैनि क अ’परा ध र ब लत्का’रका घट’ना ‘भइरहे का हुन्छन् ।”
त्यसैले, नागरिकको चेत’नास्तर’नउठेसम्म सामाजिक
सभ्यता माथि उठ्न सक्दैन । हुन त हाम्रो स्कुलिङ यिनै दलका विधान, घो’षणापत्र र आन्दो’लनको मार्गले निर्धा रण गरिदियो । त्यहि भएर हामी उग्र, अशि’ष्ट, ब्य’भिचार, भ्र’ष्ट, कुलं घा’र, असभ्य, न’रपशु जस्ता हर्क’त सिक्दै आयौं ।”उदाहरणका लागि हर्न बजाउन हुँदैन, चर्को बोल्न
हुँदैन भन्यो भने झन एकोहोरो चिच्याइ रहन्छौं । नेता ग’तिला भएनन्, भन्न सक्छौं, आँफै गतिलो वनेर उदाहरण पेश गर्न सक्दैनौं । के हामी नेता भन्दा एक कदम अघि बढेर सभ्य ता सिक्न सक्दैनौं ? केहि दलहरुले ह त्या, हिं ,सा, अ परा’ ध, आ’रोप, भ’ड्का उन मात्र सिकाए ।”